Dagaal kaqarxa Yurub oo laga cabsi qabo. | Radio Hormuud
"Yurub hadda waxay qarka u saaran tahay inuu dagaal ka qarxo marka loo eego sidii ay ahayd tan iyo markii ay burburtay Yugoslavia-dii hore."
Dad yar oo ku sugan halkan ayaa aaminsan in Moscow ay leedahay awood millatari, oo waxa ay leeyihiin: "Ha ka fikirin lacagta ama dhaqaalahooda, ama taageerada dadka dalkooda."
Run: Midowga Yurub wuxuu uga digayaa aqalka Kremlin-ka "cawaaqib xumada ka dhalan karta" haddii uu qaaddo tallaabo milatari oo ka dhan ah dalka deriska la ah ee Ukraine. Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock oo ku sugan Kyiv sidoo kalana booqday Moscow ayaa sidaas sheegtay Isniintii.
Sweden waxay boqollaal ciidan usbuucan dhamaadkiisa geysay jasiiradda istaraatiijiga ah ee Gotland - oo ku taal badda Baltic. halka Danmark ay xoojisay joogitaankeeda gobolka maalmo ka hor.
Xukuumadda Moscow ayaa waxay raadineysaa inay kala qaybiso oo ay khalkhal geliso Yurub - iyada oo dooneysa inay gilgisho dheelitirka awoodda qaaradda Yurub si Ruushka uu uga faa'iideysto.
Raysal wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa ii sheegay dabayaaqadii sanadkii hore in reer galbeedku ay u baahan yihiin inay "ka kacaan hurdadooda la xiriirta juqraafyadda" ee ku saabsan ujeedooyinka Moscow.
"Waddamada Midowga Yurub ee waxay oran lahaayeen hadda waan ka toosnay hurdada wax badanna waan fahanay."
Moscow ayaa beenisay - in kasta oo ay ciidamo badan ka ururiyeen xudduudda Ukraine - in ay qorsheynayaan duullaan militari. Balse waxay soo saartay Nato liis ay ku qoran yihiin dalabaadyo amni.
Maamulka Biden wuxuu si hagar la'aan ah u sugayaa mowqif adag oo ka soo baxa Midowga Yurub kaas oo ku saabsan cunaqabataynta suurtagalka ah ee ka dhanka ah Ruushka, iyadoo kuxiran tillaabada ay Moscow qaadayso: duullaan militari oo oo ay ku galaan Ukraine, ama weerarrada internet-ka.
Waxa ay doonaysaa in ay ku degdegto Midowga Yurub in ay ku heshiiyaan mawqif adag oo ku saabsan cunaqabataynta - iyada oo si fiican u ogsoon in, siyaasadda arrimaha dibadda, ansixintu ay u baahan tahay inay noqoto mid ay u dhan yahihiin dhammaan waddamada xubnaha ka ah Midowga.
Ciidamada kaydka ah ee Ukraine ayaa ka qayb qaatay dhoolatus bishii December iyadoo xiisada kala dhaxaysa Ruushka ay cirka isku sii shareereyso
Mr Wallace ayaa mar sii horeysay uga digay Moscow in ay jiri doonto "cawaaqib" ka dhalan tallaaba kasta oo Ruushku u qaado dhanka Ukraine. Britain waxay u taagan tahay inay ka hortagto oo ay istaagto" cagajuglaynta", si kasta oo uu khilaafka u fogaado. ayuu yiri,
Kremlin-ka ayaa meesha ka saaray sheegashada Washington waxa uuna ku tilmaamay "mid aan sal lahayn".